FSX na-n'iyi mgbe na-agba ọsọ Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10-64 na free ụgbọ elu na MP Sessions. Ọ bụ n'ebe a fix?
The nke bụ ofu na abụọ mfe nzọụkwụ:
Nzọụkwụ 1: DownloadUIAutomationCore.dll
Kwụpụ 2: itopusi na ZIP faịlụ na ebe ahụ amịpụtara UIAutomationCore.dll na-akpata gị FSX echichi na nchekwa ebe faịlụ fsx.exe bi. Jide n'aka FSX na-adịghị na-agba ọsọ.
Mgbe nke a, na-amalite FSX na ị ga-ahụ na ịmafe echiche na FSX, agaghịkwa emecha na-akpata FSX ka ugboelu.
-Enweghị a fix, FSX ga kpọgidere nakwa dị ka ị ga na-"timed si" na a multi ọkpụkpọ nnọkọ. Unu na-eji ihe ọ bụla ọzọ nsụgharị nke UIAutomationCore.dll, ebe ọ bụ na nke a version bụ naanị version nke ga-akwụsị mkpọka.